မုံရွာမြို့ ချင်းတွင်းရတနာဈေး မီးလောင်ကြွမ်းမှုဖြစ်ပွား (Eleven News) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မုံရွာမြို့ ချင်းတွင်းရတနာဈေး မီးလောင်ကြွမ်းမှုဖြစ်ပွား (Eleven News)
မုံရွာမြို့ ချင်းတွင်းရတနာဈေး မီးလောင်ကြွမ်းမှုဖြစ်ပွား (Eleven News)
Posted by Bayote on Jun 3, 2010 in Myanma News, News | 10 comments
မုံရွာမြို့ရှိ ချင်းတွင်းရတနာဈေးတွင် ယနေ့ (၃-၆-၂၀၁၀) နံနက် (၃)နာရီကျော်ခန့်က မီးလောင်ကျွမ်းမှု စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။အဆိုပါ ဈေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ နံနက် (၂း၄၅) နာရီခန့်တွင် လျှပ်စစ်မီးလာကြောင်း၊ အဆိုပါမီးလာပြီးမကြာမီ ဖောင်းကနဲအသံကြားပြီး မီးစတင်လောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ပုလဲ၊ မြင်းမူ၊ အလုံ၊ ဆားလင်းကြီး တို့မှ မီးသတ်ယာဉ်များ လာရောက်ငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိကြောင်း၊ နံနက် (၈)နာရီခန့်တွင် မီးညွန့်ကျိုးသွားကြောင်း၊ ယခုအထိ (နံနက် ၉း၄၅ နာရီအထိ) မီးငြိမ်းသတ်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Source : Eleven News
Eleven News site မှာလဲမတွေ့ပါလား ဒီသတင်းကို။
ဓါတ်ပုံကလဲ မင်္ဂလာဈေးက ပုံကြီးသုံးလို့။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှုာမရဖြစ်နေတာနဲ့ ပုံကြီးကြီးတွေလဲ မြင်လိုက်ရပါပြီ။
ဘရုတ် က မဟုတ်တာမလုပ်မှန်းသိလိုက်ပါပြီ။
ဘာလို့ဝါယာေ၇ှာ့ခ်တွေပဲဖြစ်နေရတာလဲ
ဘာလို့ လဲ …. ဘာလို့ လဲ…..
လောင်ပြန်ပြီလား မီးက ကြာရင် မီးမီးနဲ့ လူတွေတော့ ပိုပိုပြီးလန့်လာကုန်တော့မှာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် ဈေးကြီးတွေပဲ မီးလောင်တာကတော့ ထူးဆန်းနေသလားလို့။
ဈေးတွေမှာဆိုလူတွေက ကိုယ့်စီးပွားရေးကိုပဲ လုပ်နေကြတယ်လေ … တစ်ခြားဟာတွေကဘေးမဲ့လိုဖြစ်နေတယ်…. ဂရုမစိုက်ကြဘူး …… ဟိုတစ်နေ့ကလည်းကျောက်ဆည်မြို့မဈေးမှာ ၀ါယာရှော့ဖြစ်သေးတယ် ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး …. ၀ါယာတွေကဟောင်းနေတော့ပေါက်ပြဲတာကနေ ဖြစ်တာ … ဒါတောင်ဈေးဖွင့်ချိန်မလို့ ဈေးပိတ်ထားရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မပြောတက်ဘူး …. သင့်ကြောင့်မီးမလောင်ပါစေနဲ့ဆိုင်းဘုက်ကပြောင်းရတော့မယ်ထင်တယ်
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာ တစ်တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီထင်တယ်
ရေ၊မီး၊မင်း၊ခိုးသူ၊ မချစ်မနှစ်သက်သောသူ ဆိုတဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ မပြည်စုံသေးတဲ့ စစ်အစိုးရကို အားလုံးပြည့်စုံသွားအောင် သဘာဝကကူညီနေတယ် ပြောရမယ်။
ရေကြီး၊ မီးလောင်၊ မတရားတဲ့မင်း၊ သူခိုးအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ၊ မချစ်မနှစ်သက်သူတွေ စုနေတဲ့ စစ်အစိုးရ
ဖစ်မှ ဖြစ်ရလေဗျာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းဈေး၊ မင်္ဂလာဈေးတွေ ဆုံးရှုံးအပြီးမှာအလားတူဖြစ်ရပ်တွေထပ်မပေါ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေမိတဲ့ ကျွန်တော့် ဆန္ဒမပြည့်ဝပါလား ။ ဆုံးရှုံးခံလိုက် ရတဲ့ ဈေးသူဈေးသား ပြည်သူလူထုတွေအတွက် အထူးပဲ ရင်နှင့်အမျှ ထပ်တူထပ်မျှ ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်မကောင်းဖြစ် မိ၊ ၀မ်းနည်းမိပါတယ် ။ ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲက တစ်ပါးက၊ ဈေးတွေကိုပဲ မျက်စိကျနေတာလား ဆိုတာ တွေးမိပြီး အံသြနေမိပါရဲ့။ လူခိုးတော့ အစုတ်ကျန်၊ မီးခိုးတော့ အပြုတ်နှံဆိုတာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်နေသလားလို့ တွေးရင်းတွေးရင်း… ။